कसरी यी सजिलो अनुभवहरूको साथ क्रिस्टल बनाउन सिक्नुहोस्
क्रिस्टल कसरी बनाउने?
क्रिस्टलहरू धेरै तरिकामा गर्न सकिन्छ। यो सजिलो क्रिस्टल बढ्दो व्यञ्जनहरूको एक संग्रह हो, यसको क्रिस्टलहरू कस्तो लाग्छ र तपाईंको क्रिस्टलहरूमा सफलता कसरी गर्ने भन्ने सुझावहरू।
चीनी क्रिस्टल या रक कैंडी
यो निलो चट्टान कैंडी व्यावहारिक रूपमा आकाशको रूपमा उस्तै रंग हो। रक क्यान्डी चीनी क्रिस्टलबाट बनाइएको छ। क्रिस्टलहरू रमाइलो र सजिलो छ। एनी हेल्मिमेनस्टाइन
रक कैंडी वा चीनी क्रिस्टलहरू विशेष गरी बढ्न राम्रो हुन्छन् किनभने तपाईं समाप्त क्रिस्टल खाल्नुहुनेछ! यी क्रिस्टलको लागि आधारभूत नुस्खा हो:
3 कप शर्करा
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने तपाईले खाद्य रंग वा तरल स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्यासिल वा चाकूबाट समाधानमा मोटो स्ट्राइक फाँटमा यी क्रिस्टलहरू बढ्न सजिलो छ। उत्तम परिणामहरूको लागि, कुनै पनि क्रिस्टलहरू हटाउनुहोस् जुन तपाईको स्ट्रिंगमा बढ्दै छैन। बढि »
यो एक अल्ट्रा क्रिस्टल हो। क्रिस्टलको आकार साधारण घरेलू परिस्थितिमा बृद्धि गरिएको एल्यूम क्रिस्टल द्वारा लिइएको सबै भन्दा साधारण रूप हो। Todd Helmenstine
यी क्रिस्टलहरू हिरा जस्तो हुन्छन्, बाहेक जुन तिनीहरू हेर्नु भएको छ कुनै पनि हीरा क्रिस्टल भन्दा धेरै ठूलो छ! एल्युम एक खाना पकाउने मसाले हो, त्यसैले यी क्रिस्टलहरू गैर-विषाक्त हुन्छन्, यद्यपि तिनीहरूले राम्रो स्वाद गर्दैनन्, त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई खान चाहँदैनन्। एल्यूम क्रिस्टल बनाउन को लागि, बस मिश्रण:
2-1 /2चम्मच एल्यूम
1/2 कप धेरै न्यानो पानी ट्याप गर्नुहोस्
क्रिस्टलहरू केही घण्टा भित्र तपाईंको कन्टेनरमा निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। तपाईं यो क्रिस्टल पनि चट्टान वा अन्य सतहहरूमा बढी प्राकृतिक रूपको लागि बढ्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत क्रिस्टल कन्टेनरको बन्दरगाह संग बन्द स्क्रैप गर्न सकिन्छ र कागज तौलियामा सुकेको अनुमति दिईएको छ। बढि »
तपाईं बोरक्स क्रिस्टलहरू ताराको आकारमा बढाउन सक्नुहुन्छ बोरक्स क्रिस्टल ताराहरू बनाउन। एनी हेल्मिमेनस्टाइन
यी स्वाभाविक रूपमा स्पष्ट क्रिस्टल पाइप क्लीनर आकृतिहरूमा बढ्न सजिलो छ। रंगीन पाइप क्लीनर छनौट गर्नुहोस् वा रङ्गित क्रिस्टलहरू प्राप्त गर्न खाना खानुहोस्। तपाईं तयार गर्न को लागी सबै को लागी उकालो पानी आफ्नो कंटेनरमा डाल्न र बोरक्समा हलचल नभएसम्म अरु भंग गर्दैन। एक अनुमानित नुस्खा यो हो:
3 चम्मच बोरक्स
Epsom साल्ट क्रिस्टल सुई
Epsom साल्ट क्रिस्टल। काई स्केबर
यो नाजुक क्रिस्टल स्पिक्स एक कपमा तपाईंको फ्रिजमा केही घण्टापछि, वा कहिलेकाहीं छिटो छिटो हुन्छ। बस एकसाथ मिलाउनुहोस्:
1/2 कप Epsom नमक
फ्रिजमा प्याज राख्नुहोस्। क्रिस्टलहरू तिनीहरूलाई जाँच गर्न ध्यान राख्नुहोस् जब तिनीहरू कमजोर हुन्छन्। बढि »
कपर सल्फेट क्रिस्टल
कपर सल्फेट क्रिस्टल। एनी हेल्मिमेनस्टाइन
कपर सल्फेट क्रिस्टलहरूले स्वाभाविक रूपमा नीलो हीरा बनाउँछ। यी क्रिस्टलहरू बढ्न सजिलो छ। सिपाही तांबे सल्फेट एक प्याला उबलने पानीमा घुमाउनुहोस् जबसम्म अरु थप भइनन्। कंटेनरलाई रातभर रातभर अन्डर गर्न अनुमति दिनुहोस्। एक चम्मच वा टूथपे साथ क्रिस्टलहरू सङ्कलन गर्ने यो उत्तम हो किनभने समाधानले तपाईंको छाला निलो पार्छ र जलन उत्पन्न हुन सक्छ। बढि »
सोडियम क्लोराइड वा टेबल साल्ट क्रिस्टल
यो नमक वा सोडियम क्लोराइड को क्यूबिक क्रिस्टल संरचना प्रदर्शित क्रिस्टलहरू हुन्। नमक क्रिस्टलहरू यूरो सेन्टिमिटरका लागि देखाइएका छन्। Choba Poncho
यो परियोजना कुनै पनि प्रकार को मेज संग नमक , आयोडित नमक, रक नुन , र समुद्री नमक समेत कार्य गर्दछ। अझ बढि हुने छैन जबसम्म मात्र उबलते पानीमा नुन हल गर्नुहोस्। नमकको घुलनशीलता तापमानमा अत्यधिक निर्भर छ, त्यसैले तातो ट्याप पानी यस परियोजनाको लागि पर्याप्त हुँदैन। नमकमा हलचल गर्दा पानीको स्टोभमा राम्रो हुन्छ। क्रिस्टलहरू अनस्टुरमा बस्न अनुमति दिनुहोस्। तपाईंको समाधान को एकाग्रता मा निर्भर गर्दछ, तापमान, र तपाईंको आर्द्रता तपाईं रातभर क्रिस्टल प्राप्त गर्न सक्छन् या उनलाई बनाउन को लागि केहि दिन लाग्न सक्छ। बढि »
Chrome Alum क्रिस्टल
यो क्रोम एल्यूमको क्रिस्टल हो जुन क्रोमियम एल्युम भनिन्छ। क्रिस्टलले विशेष गरी बैजनी र अक्टोडोड्रल आकार देखाउँछ। Raike, विकिपीडिया कमेन्ट
क्रोम एल्यूम क्रिस्टलहरू गहिरो बैंगनी रंगमा छन्। केवल क्रिस्टल बढ्दो समाधान तयार पार्नुहोस् र क्रिस्टलहरू बनाउनको लागि अनुमति दिन्छ।
300 ग्राम पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट (क्रोम एल्यूम)
500 मिलीलीटर उबलते पानी
क्रिस्टल वृद्धि देख्नको लागि समाधान धेरै गाढा हुनेछ। तपाईं समाधानमा उज्ज्वल टर्चलाइट चमक गरेर विकासको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ वा सावधानीपूर्वक समाधानको समाधान गरेर। भाला नगर्नुहोस्! समाधान बार्दा तपाईंको नतिजाहरू ढिलो हुन सक्छ, त्यसैले आवश्यक भन्दा बढी जाँच नगर्नुहोस्। बढि »
तांबे एसीनेट मोनोहाइड्रेट
यी तांबे को क्रिस्टल (II) एक तामा तार मा बसाई एसिसेट हो। चुबो पोंओगो, सार्वजनिक डोमेन
तांबे एसीटेट मोनोहाइड्रेट नीलो हरियो मोनोकोलिनिक क्रिस्टल उत्पन्न गर्दछ। यी क्रिस्टलहरू सिर्जना गर्न तपाईंले निम्नलाई आवश्यक पर्दछ:
20 जी तांबे एसीटेट मोनोहाइड्रेट
200 मिलीलीटर गरम बिग्रिएको पानी
पोटेशियम डाइग्रोमेट क्रिस्टल
पोटेशियम डाइग्रोमेट क्रिस्टलहरू प्राकृतिक रूपले दुर्लभ खनिज लोपोजाइटको रूपमा हुन्छन्। Grzegorz Framski, Creative Commons License
तपाईं तिनीहरूलाई नारंगी बारी गर्नको लागि क्रिस्टल समाधानहरू खाली गर्न खाद्य रंग थप्न सक्नुहुन्छ, तर यी पोटेशियम डाइच्रोमेटिस्ट क्रिस्टलहरू उनीहरूको उज्ज्वल नारंगी रंगमा आउँछन्। क्रान्स्टल बढ्दो समाधान तयार पार्नुका साथै पोटेशियम डाइम्रोमेट को रूप मा तपाईं गर्म पानी मा गर्न सक्छन्। समाधानको साथ सम्पर्कबाट बच्न हेरचाह लिनुहोस्, किनकि कम्जमा विषाक्त हेक्साभलेंट क्रोमियम हुन्छ। तपाईंको न्यानो हातहरू संग क्रिस्टलहरू ह्यान्डल नगर्नुहोस्। बढि »
मोनोमोनियम फास्फेट क्रिस्टल
अमोनियम फास्फेटको यो एकल क्रिस्टल रातभर बढ्यो। हरियो-टाँस्ने क्रिस्टलले पनीर जस्तो देखिन्छ। अमोनियम फास्फेट क्रिस्टल बढ्दो किटमा सबैभन्दा सामान्य रासायनिक पदार्थ हो। एनी हेल्मिमेनस्टाइन
यो क्रिस्टल बढ्दो किटमा आपूर्ति गरिएको रासायनिक हो। यो nontoxic छ र विश्वसनीय परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ।
6 चम्मच मोनो अमोनियम फास्फेट
Nonmetallic तत्व सल्फर को क्रिस्टल। स्मिथसोनियन संस्था
तपाईं सल्फर अनलाईन गर्न वा पाउडर स्टोरमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यी क्रिस्टलहरू समाधानको सट्टामा तातो पिउँदैनन्। बस एक लौ मा एक स्याण्डल या बर्नर मा पिघल। सावधान रहनुहोस् कि सल्फर आगो लाग्दैन। एक पटक पिघिसम्म एकपटक, यसलाई गर्मीबाट हटाउनुहोस् र यसलाई ठुलो ठोक्नुहोस्। बढि »
विज्ञान मेला परियोजना प्रतिवेदन कसरी लेख्न
कहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड वा लुई किन्नुहोस्
बच्चाहरु को लागि मजा विज्ञान प्रयोगहरु तपाईं घर मा गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईंको आफ्नै जादू चट्टानहरू बनाउनुहोस्
एक्थोथीमिक रासायनिक प्रतिक्रिया कसरी बनाउने?
आगो विज्ञान मेला परियोजना विचार
स्टोनहाङ्ग, विल्टशायर, यूके
सुरू गर्नु - बिजुली निर्माणको लागि बिजुली निर्माण
कम्प्युटर प्रिन्टरहरूको इतिहास
बास मत्स्य पालनका लागि मिल्ने रोल्स र रील्स
10 साधारण परीक्षण गल्ती
लामो सप्ताहांतमा के गर्ने
कुन टाइगर वुड्स प्रायोजकहरु को घोटाले को परिणाम को रूप मा हटा दिए?
के कीराहरू सिक्न सक्छन्?
TPage को ट्याबहरू लुकाउन कसरी कन्फ्लू कन्फेल डेल्फी नियन्त्रण
बब डिलनको मोटरसाइकल दुर्घटनाको प्रभाव बुझ्न
तपाई अघि जानुहोस्: टोउटन युद्धक्षेत्र
व्याकरणमा एक विज्ञापन
अमेरिकी जेलबाट भूत कथाहरू हान्दै
उत्तम SNL राजनीतिक स्किट्स
इतिहास र आधार राहत मूर्तिकलाको उदाहरण
हिंसा र आतंकवादको इतिहास
'Levantar' प्रयोग गर्दै
प्रतिबन्ध मार्क को किस प्रकार विराम हो?
सीजन स्की वस्त्र र उपकरण सेल्स को समापन को लागि 20 साइटहरु
सन्दर्भ शब्दावली (शब्दावली)
पगन सबब पाक कला
दुबई को भूगोल
गर्न र छैन
मलाई कसरी थाहा छ यदि एक समाजशास्त्र प्रमुख मेरो लागि सही छ भने?